トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni yesihlanu futhi "uyayekela" is
Ngo isigaba yangempela kuze kube izangoma [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze uthole indlela
umphefumulo twin ebuyiselwa omunye umphefumulo yasekuqaleni futhi, esigabeni yesihlanu kanye ukudedela okunamathiselwe kwenye inhlangano, bebodwa mhlawumbe isikhathi sokuhlola uqobo.
abantu ababili ukuheha nomunye kakhulu, ukuphatheka kabi mutual ngesikhathi Ngiyakuthanda kakhulu, abagijimi wasibalekela ubudlelwane, Chaser ukuxosha, kuba isimo lapho ingqondo kuyaphazamiseka, ngokulandelana.
Nokho, ukuze umphefumulo twin uyaphinda abhekane nazo, abopha kakhulu, uzodinga nomunye bayakhonza Awakening ezingokomoya. Ukuze Awakening, kufanele usule izinkinga onikezwe nomunye ngalesi sikhathi.
Kuleso umsebenzi, kulahliwe ukuzazisa ebeselimhluphe abaphikisi ngokwami, kubalulekile ukuba nginikeze isinyathelo ngasinye umphefumulo. Yini eyenza ibe yinhle, ukhululeka uthando okunemibandela esidlule, siyakwazi ukuthulula uthando olungenamkhawulo. Ngo
yesihlanu twin esiteji Seoul umgijimi Chaser kuyinto
? 2 ubuhlobo ngesikhathi sabo ukuze basize Awakening ezingokomoya komunye nomunye ukuba sisale kuNkulunkulu, ngokuthi ubudlelwano ezimbili zonke kwesokunxele kuNkulunkulu wena. Ngu nomunye ngaphandle nge ibanga, ke uzobe ebhekene ngamunye nezinselele, kodwa uNkulunkulu ngakho ake aphinde kimi wabumbana nemvelo lapho ufika Awakening ezingokomoya komunye nomunye.
Nokho, lapho nje umgijimi uma wena ulinde ngesineke uyatjho ubuye Chaser yokuqala, akunjalo. Chaser wake washiywa kukhathazeka ukuze umgijimi, kudingeka sizihlole kabusha lokho inhliziyo yami nasemphefumulweni ufuna ngempela.
kanye abagijimi, izozama ukukhohlwa ukukhumbula ukwesaba lomzwelo olujulile we Chaser, ngabona ukuthi efuna Chaser ezingeni umphefumulo, sizophuma size uthando ongenalo Koe.
? abantu abangu-2 Chaser okwakukade obalekayo ukuze
umgijimi ukulandela kwemvelo ngendlela efanayo, abagijimi ngeke ukulinda ubuye yabo yokuqala, kodwa kuyadingeka ukwandisa uligqolozele ngokwami ??okwamanje. Nokho, ukuze ube naso esanele ukukhulisa bebodwa, kungenzeka abanye abantu bacabanga ayikwazi wahlanganiswa umgijimi ngempela.
Nokho, abantu ababili ungumphefumulo ayiwele naye, sizoqhubeka nokuguquguquka ngendlela efanayo endaweni ngayinye. Ngamanye amazwi, ngesikhathi esifanayo futhi ukubingelela Awakening ezingokomoya ukuthuthukisa ngokwakho ngokwanele, akufanele khona bayeke kwenzeka. Ngamanye amazwi, lapho angikwazi ngiphinde ngahlangana abagijimi, Angazi ngokwami ??kube enye inhlangano futhi ukulungiswa okwanele.
uthando olungenamkhawulo Ake ubheke emhlabeni
esigabeni yesihlanu akuyona kuphela uyazi uthando olungenamkhawulo ukuthi batheleka umphefumulo twin beqembu, wathela lomzwelo olujulile futhi abantu emhlabeni, zonke futhi uzocelwa ukuthethelela. Uthando, kuyosheshe kube kungenzeka ukubangela resonance komphefumulo abangamawele. Ngaphandle ugijimele
, wazi ukuthi abantu ababili babe izimfuno kwemiphefumulo yabo siqu ezingeni ngalinye, kufanele uvumele futhi kimi wabumbana abantu ababili Nkulunkulu.
In esigabeni yesihlanu, hhayi kuphela uyazi uthando olungenamkhawulo ukuthi batheleka umphefumulo twin beqembu, wathela lomzwelo olujulile futhi abantu emhlabeni, futhi kuyodingeka ukuba ungithethelele zonke. Uthando, kuyosheshe kube kungenzeka ukubangela resonance komphefumulo abangamawele. Ngaphandle ugijimele